जनप्रतिनिधिको निगरानी जनताले गर्नुपर्छ : मेयर बस्नेत
न्युज कारोबार काठमाडौं वैशाख १२, २०७५
रामेछाप जिल्लाको मन्थली देशकै कान्छो नगरपालिका हो । यो नगरपालिकामा अन्य जस्तो प्राकृतिरुपमा सम्पन पनि छैन । छन् त केवल रुखो पाखा र धुलाम्य डाँडाहरु छन् । जनताले जीताए हराभरा र उर्वर भूमिको रुपमा परिणत गराउने उद्घोष गर्दै जनतामाझ गएका रमेशकुमार बस्नेतलाई उनैले भने बमोजिम निर्वाचित गराए । जनताको माझमा गरेको प्रतिबद्धता र मन्थली नगरपालिकालाई उनैले भनेको स्वर्गीय आन्दको भूमिकारुपमा परिणत कहिले गराउछन् ? मन्थली नगरपालिकाका मेयर रमेशकुमार बस्नेतसँग न्यूज कारोबारकर्मी सञ्जय श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :
मन्थलीलाई समृद्ध बनाउन तपाईले कस्तो गुरुयोजना बनाउनु भएको छ ? – म निर्वाचित भएर आएको १० महिना भएको छ । यो अवधिमा मैले गुरुयोजना बनाउने भन्दा पनि गुरुयोजना बनाउनको लागि आवश्यक कानुन तथा आधारभूत सर्भेका कामहरुलाई अघि बढाएको छु । यसका साथै सम्पूर्ण वडामा रहेको सम्भाव्यता अध्ययन र वडास्तरीय योजना जम्मा गर्ने कामहरु भइरहेका छन् ।
गुरुयोजना बनाउन जनशक्ति र बजेटको अवस्था के छ ? – गुरुयोजना भनेको पाश्र्वचित्र हो । यसमा हरेक बर्ष के गर्ने र ५ बर्ष वा १० बर्षमा के गर्ने भन्ने कुराको स्पष्ट खाका हुन्छ र त्यही खाका अनुरुप हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ भन्नैपर्ने हुन्छ, हामी आएको १० महिाना भयो यहाँ कर्मचारी नै प्रयाप्त छैन । कुनै वडामा सचिव छैनन्, कुनैमा कर्मचारी छैनन्, भएका पनि पुरानै तरिकाका छन्, जो परिवर्तन हुन चाहदैनन् । अर्को कुरा मेनपावर सेट गर्न हामीसँग प्रयाप्त बजेट छैन र भएको बजेट चलाउन कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार छैन । हामी जसरी धेरै समयपछि स्थानीय निकायमा आयौं त्यो बेला ठुलै जोसजाँगर बोकेर आयौ । तर, हामीलाई वास्तवमै यहाँको वस्तुस्थिति बारे जानकारी पनि थिएन । हामीले कुनै कुरा गर्दा त्यस विषयमा पहिले योजना बनाउन आवश्यक छ । हामीले अहिले योजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । अहिले मन्थली नगरपालिकाभित्र कुन कुन ठाँउमा कस्तो किसिमको उत्पादन हुन्छ र त्यसलाई पकेट क्षेत्रका रुपमा विस्तार गर्नका के कुराको आवश्यकता छ भन्नेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छौं । हामीलाई आवश्यक जनशक्ति प्राविधिक नै हो । बजेटको सवालमा हामी अध्ययनमै छौं ।
जिल्ला समन्वय समितिले उपलब्ध गराएको प्राविधिक हुँदाहुँदै तपाईहरुलाई कस्तो प्राविधिक चाहिने हो ? – हामीलाई जिल्ला समन्वय समितिले केहि प्राविधिक उपलब्ध गराएको छ, त्यो केही मात्र भएकाले हामीलाई चाहिने जति प्राविधिक हामीसँग छैनन् । हाल भएका प्राविधिकहरुले नगरपालिकामा भइरहेका विकास निर्माणका कामहरुको अनुगमन तथा त्यहाँको डाटाहरु निर्माण गर्ने काम मात्र भ्याउछन् । बाँकी हामीलाई अध्ययन तथा सर्भेका लागि दक्ष जनशक्ति नै छैनन् ।
तपाईले चुनावका बेला घोषणापत्र बनाएरै जनताका बीचमा नगर समृद्धिका योजनाहरु बनाउनु भएकोे थियो, अहिले चाहिँ राजनीति र प्राबिधिक पाटोमा कहाँनिर तालमेल नमिलेको हो त ? – बिल्कुल हो, अहिले मन्थली नगरपालिकाको १२ वटा वडामा सुख्खा छ । त्यहाँ मुहानको पानीको कुनै सम्भावना छैन । त्यहाँ पानीको व्यवस्थापन भनेको सुनकोशीको विकल्प छैन । त्यसको लागि मैले मेरो चुनावी घोषणा पत्रमा लिप्ट सिंचाइको कुरा लेखे, यो लेख्नको लागि मैले गरेको, भोगेको र जानेको कुराले नै प्रयाप्त थियो । अब यहि कुरा कार्यान्वयनको लागि प्राविधिक चाहने हो । अहिले हामीले त्यही चुनावी घोषणा पत्रलाई नै आधार बनाएर विकासका कामहरु गरिरहेका छौं ।
विकास निर्माणका विषयमा अन्य राजनीतिक दल र वडा अध्यक्षहरुसँग कसरी सहकार्य गरिरहनु भएको छ ? – पहिलो कुरा निर्वाचनको मत परिणाम आइसकेपछि यहाँ एउटा राजनीतिक गठबन्धन भयो । त्यसको उशेश्य भनेको मेयरलाई काम गर्न नदिने थियो । त्यो गठबन्धनले बिभिन्न किसिमको कानुनी अट्चनहरु खडा गरिदियो । खासगरी कार्यपालिकाले निर्णय नै नगरी कार्यकारीले कुनै पनि निर्णय गर्न नपाउने निर्णय ग¥यो । यद्यपी यो प्रान्तिय, केन्द्रीय सरकारजस्तोस्थानीय सरकार होइन । यो तह भनेको कार्यान्वयन गर्ने तह हो । माथिल्लोस्तरको जस्तो राजनीतिक हुँदैन । स्थानीय सरकारमा पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । स्थानीय चुनावपछि भन्दा अहिले काम गर्न सजिलो भएको छ । जनताबाट निर्वाचित भएर आएपछि जो कोही पनि जनताको सेवक हो । जनताको काम गर्ने सवालमा सबै एकै ठाँउमा हुन जरुरी हुन्छ ।
रामेछाप जिल्लाको सदरमुकाममै दुषित पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ, यसको समाधान कहिले हुन्छ ? – मन्थली सुख्खाग्रस्त क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा मुहानको पानीको सम्भावना भनेको शुन्य हो । यो क्षेत्रमा पिउने पानीको व्यवस्थापन भनेको लिप्ट सिस्टमबाट नै हो । मन्थली बजार क्षेत्रमा पनि लिप्ट सिस्टमको पानी नै प्रयोग भइरहेको छ । यसमा कहिलेकाहिँ प्राविधिक समस्या आउँछन् । मन्थली नगरपालिकाभित्रका सबै वडामा पिउने पानीको शुलभताका लागि सबै वडामा यसको अध्ययन तथा सर्भेको काम भइरहेका छन् भने कतिपय वडामा लिप्ट सिस्टमको लागि काम अघि बढी पनि सकेको छ । हामीले मन्थली नगरपालिकाको यो पिउने पानीको समस्यालाई प्रमुखताका साथ अगाडी बढाएको छौं । प्रविधि हामीसँग छैन, अरुको प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसो हुँदा केही समयत अवश्य लाग्छ ।
यहाँ वायु प्रदुषणको यस्तै समस्या छ, यसको समाधान कसरी हुन्छ ? – रामेछाप पहाडी जिल्ला हो । यहाँ गाँउगाँउबाट गाडीहरु आउँछन् । गाडीले हिलो धुलो बोकेर आएको हुन्छ । त्यसकारण पनि मन्थली अलि बढी धुलो र धुवाँको चपेटामा छ । यहाँ सडक जति हुनुपर्ने हो त्यति छैनन् । यहाँको स्थानीयहरुले सडक अतिक्रमण गरिरहेका छन् । कसैले सडकका लागि अलिकति पनि जमिन छोड्न तयार छैनन् । जतिबेला यो मन्थलीलाई व्यवस्थित बजारको परिकल्पना गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । विकास निर्माणमा सबैको उतिकै साथ र सहयोगको आवश्यक हुन्छ । कुनै काम गर्दा हामीले पहिला नियम कानुन बनाउन पर्छ । केही नियम कानुन हामीले बनाएका छौं । मन्थलीमा अतिक्रमण गरेका टहरा निर्माण गरेका तथा अन्य कुनै पनि हिसाबमा मिचिएका जग्गाहरु अब हामी फिर्ता गर्न भन्छौं । यदि अटेर गरे हामी कानुन अनुसार काम कारबाही अघि बढाउँछौं ।
तपाईको कार्यकालमा मन्थली नगरपालिकाको आर्थिक अवस्था कस्तो हुन्छ ? मन्थली नगरपालिकाको अहिलेको आर्थिक स्रोत भनेको घरजग्गाको करभन्दा बढी केही छैन । यहाँ प्राकृतिक तथा साँस्कृतिक सम्पत्तिहरु छैनन् जसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौं । तर पनि मन्थलीलाई समृद्ध बनाउनुछ । हामी मन्थली नगरभित्रको सिमित जमिनको प्रयोग गरी अधिकतम बढी फाइदा लिने प्रयत्न गछौं । जनताको आयआर्जनको पाटोलाई सहज बनाउँछौं ।
तपाई कार्यकालमा आर्थिकको नयाँनयाँ स्रोत के के निर्माण हुन्छ ? नगरपालिकाभित्र रहेको गिटी वालुवा अब अगामी आर्थिक बर्षबाट हाम्रो स्वामित्वमा आउँछ । यहाँ अरु पनि धेरै नयाँ सम्भावनाहरु छैन । तर भएको स्रोतसाधनलाई नै हामीले प्रयोग गर्ने हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र व्यवसायीक कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिने काम हुन्छ ।
मन्थली नगरवासीले तपाईको कार्यकालमा नयाँ कुराको के अपेक्षा गर्ने ? – मेरो कार्यकालमा मन्थली नगरपालिकाबासीले सुशासन, समावेशिता न्यायीक समानता पाउछन् । हामीले सुशासनलाई मनैदेखि पालना गरेमात्र विकास सम्भव छ । हरेक क्षेत्रमा र तहमा नगरपालिकाभित्र सुशासन र समावेशिता हुनेछ । अल्पसंख्यक जातजातीको भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र माझीहरुको भाषा संरक्षणको लागि हामीले १–४ सम्म माझी भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गरेका छौं । राज्यले दिने सबै सेवा सुविधामा नगरबासीलाई समान सहभागीता र पहुचँका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गरिरहेका छौं ।
अन्यत्यमा नगरबासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? – देशमा ठुलाठुला राजनीतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । हामीले राजनीतिक परिवर्तनसँगै सबै किसिमको अन्याय, विभेद, असमानताको अन्त्य गरेका छौं । अबको समय भनेको आर्थिक विकासको समय हो । तपाई सम्पूर्ण नगरबासीहरुले अब जनप्रतिनिधिको निगरानी गर्नुपर्छ । विकास निर्माण सबैको उत्तिकै सहभागीता आवश्यक छ । अबको शासन व्यवस्था भनेको जनताको अनुकुल हुनुपर्छ । त्यसमा तपाईहरुको साथ र सहयोग जरुरी छ ।